Godot Injini: Iyo Vhura Sosi Graphics Injini Inofambira Mberi | Kubva kuLinux
Godot Injini: Vhura Source Grafiki Injini Kufambira Mberi Zvakare
Isaac | | Chigadzirwa, Mitambo
Godot Injini yave inozivikanwa. Icho chirongwa chinonakidza, injini yemifananidzo yekugadzira mitambo yemavhidhiyo iyo yakavhurika zvachose. Haisi yega injini yemifananidzo iriko, asi ndeimwe yezvakakosha uye zvakanyanya kuvandudzwa kuseri kwezviripo. Saka kana iyo yevhidhiyo mutambo indasitiri inoda aya marudzi eakavhurwa sosi maturusi, ichi ndicho chirongwa chekutarisa.
Iye zvino Godot Injini yafambira mberi nenhau dzaGodot 4.0. Kunyanya, mugadziri Juan Linietsky anoenderera mberi nekumanikidza kuna Godot kuti arambe achifambira mberi mumatanho mahombe. Semuenzaniso, muzvinyorwa zvakapfuura pamusoro paGodot isu tatozivisa kushingirira kwavanga vachiita kuwedzera rutsigiro rweVulkan. Zvakanaka ikozvino vatora nhanho hombe munzira iyi. Vataura kuti vava kutamira kuVulkan.
Zvese izvo zvakanaka. kumberi Godot 4.0 ichavewo nekumwe kugadzirisa kunge 2D mwenje izvo zvino zvaitwa mupaseti imwe yekuvandudza mashandiro, asi zvakadaro uine zvimwe zvisingakwanisike. Kune rimwe divi, ivo vakawedzera kugona kushandisa kusanzwisisika uye kupenya semaparameter uye semagadzirirwo anopihwa kuSprite, AnimatedSprite, Polygon3D, nezvimwe. Iyo nyowani 2D zvinhu sisitimu inosanganisirwawo kubvumidza yakasarudzika tsika neyakaomesesa nyowani Vulkan renderer.
Iko hakuna zvakare kurambidzwa pane mangani magadzirirwo emumvuri ayo anogona kushandisa. Saizvozvowo, mimvuri yakarongedzwa uye yakachengeterwa kuderedza mutambo mutoro uye kuwedzera mashandiro. Injini ye2D ikozvino ine Vulkan uye basa rakasimba riri kuitwa padivi re3D kuti riuye nayo kuVulkan. Muchidimbu, kuita kwepamusoro, gadziriso yemifananidzo yakaunzwa naVulkan uye nehungwaru hwekugovera zviwanikwa ... Kufarira izvo ramangwana raGodot rakabata neiyo yemberi vhezheni, asi parizvino unogona kunakidzwa neiyo ikozvino 3.x.
Mamwe mashoko - Godot Yepamutemo Webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chigadzirwa » Godot Injini: Vhura Source Grafiki Injini Kufambira Mberi Zvakare
Maitiro ekugadzirisa setup yemitauro yakawanda muUbuntu
Collabora inoratidza zvimwe zvakawanda nezve Monado